American Solombavam-: Fitrandrahana no tokony hosoratana - Vaovao farany - Blockchain News
Febroary 17, 2018 Admin
American Solombavam-: Fitrandrahana no tokony hosoratana
Solontenan'ny Antoko Demokraty 'ny United States Ro Khanna manolotra ny hametraka ny hetra momba ny harena ankibon'ny tany ny cryptocurrencies.
Solontenan'ny Antoko Demokraty 'ny United States Ro Khanna dia mino fa ny harena ankibon'ny tany dia tsy maintsy ny cryptocurrencies hosoratana. Koa satria fitrandrahana any aoriana dia miteraka olana sasany ny tontolo iainana, ny kaongresy manolotra mba hanonerana ny fahavoazana ity.
Raha famokarana entona karbaona dia hetra, Ary nahoana no tsy manao toy izany koa amin'ny harena ankibon'ny tany cryptocurrencies? Bitcoin fitrandrahana sy ny angovo lehibe cryptocurrencies mitaky vola lany. Ny manam-pahefana amin'ny firenena maro Efa nataonao ny manahy momba ny fitomboan'ny amin'ny habetsahan'ny herinaratra lany ritra, ary ny mpiaro ny tontolo iainana ireo olana lehibe mialoha. Izao no Solombavam-Amerikana Nieritreritra:
Ny hetra dia azo nampanompoany nampiasa fahaiza-manaony, na ny hetra eo ny fiasan'ny toeram-piompiana famokarana BitCoins – satria misy fiantraikany amin'ny tontolo iainana, dia tsy maintsy mandoa azy io.
Amin'ny ankapobeny, ny kaongresy mpiaro ny fanaraha-maso ny lafiny rehetra amin'ny cryptocurrency varotra, anisan'izany ny mpanao ady amin'ny hosoka. Khanna cryptocurrency ihany koa dia mino fa zava-dehibe ny varotra no hanara-maso, mba hiadiana amin'ny fampihorohoroana.
Fanitsiana In A Bull-Trend | W ...
Previous Post:White House ofisialy: tsy akaiky Bitcoin lalàna
Next Post:Inona no tonga Manaraka ny Bitcoin Price?
dualwerk hoy i:
Febroary 27, 2018 amin'ny 3:51 AM